स्वास्थ्य/जीवनशैली Archives | Page4of 193 | Nepalese.org - No. 1 News Portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actoress, Audio, Video, Interview
यौन सम्बन्धपछि पुरुषलाई निन्द्रा किन लाग्छ ? यस्तो छ वैज्ञानिक कारण…
यौन सम्बन्धपछि पुरुष सुत्न चाहन्छन् भने महिला कुराकानी गर्न चाहन्छन् । यसको जैविक कारण छ ,वास्तवमा चरमोत्कर्षपछि शरिरमा प्रोलेक्टिन नामक बायोकेमिकल रिलिज हुन्छ । यसले शरिरलाई रिल्याक्स गर्दछ... Read more
शास्त्रका अनुसार यस्ता युवतीसँग संगत गरे खुल्छ पुरुषको भाग्य !!!
काठमाडौ । हाम्रो जीवनशैली र आचरणबारे विभिन्न शास्त्रहरूमा अनेक व्याख्या गर्ने गरेको पाइन्छ । आज हामी समुद्रशास्त्रमा उल्लेख भएका केही कुरा तपाईंलाई बाँड्दैछौं ।उक्त शास्त्रमा कस्ता महिलासँग... Read more
जाडाेमा मेथी खाँदा हुने १० फाइदा…
मेथी हाम्रो भान्सामा नभइनहुने एक मसला हो जसमा प्शस्त औषधीय गुणा पाउन सकिन्छ । यसलाई पूर्वीय समाजमा विशेष महत्व दिइन्छ । मेथी एक बहुगुण भएको मसला हो, जसलाई सामान्य रुपमा तरकारी पकाउँदा फुराउन... Read more
जानीराखौं मुलाको पात खानुका फाइदाहरु !
एजेन्सी । धेरैजसो मानिसले मुला खाएर त्यसको पात त्यसै फ्याकिदिने गर्छन् । तर तपाइलाई थाहा नहुन सक्छ मुलाभन्दा बढि मुलाको पात खानु फाइदाजनक हुन्छ । यसमा धेरै पौष्टिक तत्वहरु पाइन्छ जसले हामीला... Read more
घाउ चाँडाे निको नहुने यस्ता छन् केही कारण
एजेन्सी– हामीलाई घाउ वा चोटपटक लाग्दा आफैं पनि निको हुन्छ । तर कतिपय अवस्थामा हाम्रो शरीरले यस्ता घाउ वा चोटपटक निको÷ठीक पार्न सक्दैन र यस्ता घाउ क्रोनिक पनि बन्न सक्छन्। घाउ भएको निकै दिनसम... Read more
क्रिम पाउण्डरको प्रयोग बिना नै यसरी सुन्दर बन्न सकिन्छ
एजेन्सी । युवतीहरु सुन्दर रहन विभिन्न क्रिम पाउडरको प्रयोग गर्छन् । केही यस्ता घरेलु उपायहरु पनि छन् जसका कारण सुन्दर रहन काम सकिन्छ । हरेक कुरा मार्केटमा पाइने समाग्रीभन्दा पनि केही घरेलु उ... Read more
दुधमा नबेसार मिसाएर खानुका यी हुन् १२ फाईदा…
काठमाडाै‌ । आयुर्वेदमा बेसारलाई सबैभन्दा राम्रो प्राकृतिक एन्टिबायोटिक भनेर व्याख्या गरिएको छ । यसैले छाला, पेट तथा अन्य रोगका लागि यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ । त्यस्तै दूधमा पनि प्राकृतिक एन्... Read more